SomaliaReport: Ka Noqosho: “RW Cabdiweli M. Cali oo Hadl
Waxaa ka xunahay inaan ku ogeysiino inaan warbixin aad u khaldan aan soo tabinay dhawaan.
March 23-keedii, Somalia Report ayaa daaabacday wareysi umuuqday in Shukri Cabdi ay la yeelatay Ra’iisul Wasaaraha Cabdiweli Maxamed Cali ee dawlada ku meelgaarka Soomaaliyeed, oo cinwaankeedu ahaa “RW Cabdiweli Cali oo Hadlay.” Waxaa lasoo bandhigay inay Marwo Cabdi aysan la xiriirin Ra’iisul Wasaaraha Cali oo wareysigeeda oo dhami uu yahay mid la been abuuray.
Shukri Cabdi waxay Somalia Report dhawaan ku daabacday labo maqaal oo kala ah, “Shabaab: Ma Shaqaaleye Dhexdhexaad ah baa?” (La daabacay 03/22/2012) iyo “Duqeynta KDF oo Lala Eegtay Tuulada Bardara.” (La daabacay 03/24/2012). Inkastoo aan la cadeyn in labadan qoraal ay khaldan yihiin, laakiinse waxay daacadnimadayadu ku jirtaa inaan shabakada ka saaro. Waxaan kaa ballanqaadeynaa inay noo qorsheysan tahay inaan soo xaqiijino run ahaantooda.
Maadaama aan ahay diyaariyaha maamula (Managing Editor) Somalia Report, aniga ayaa masuuliyada khaladkan qaatay. Waxaan raaligelin daacad ah usoo gudbinayaa Ra’iisul Wasaaraha Cali, xubnaha Dawlada Ku Meel Gaarka Soomaaliyeed (DKMG), iyo akhristayaashayada.
Waaan ka xunahay khaladka, waxaan ballanqaadeynaa khaladaadkan oo kale aysan dhicin mustaqbalka.
Jay Bahadur Diyaariyaha Maamula, Somalia Report